Dagaal dhexmaray Ciidamada Dowladda iyo Shabaab | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dagaal dhexmaray Ciidamada Dowladda iyo Shabaab
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Dagaal la isku gabal dhacsaday oo Ciidamada Dowladda Federaalka iyo xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab ku dhexmaray degaanka Qalimow oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dagaalkan ayaa yimid kadib markii xoogaga ururka Al-shabaab ay weerar dhabagal ah ku qaadeen fariisin Ciidamada Dowladda ay ku leeyihiin degaanka, halkaasi oo labada dhinac uu ku dhexmaray dagaal khasaare geystay.
Dagaalkan oo soo gaaray ilaa maqribnimadii caawa ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, sida ay inoo sheegeen dadka degaanka oo warbaahinta Radio baidoa
la soo xiriirey.
Khasaaraha horudhaca ah ee ka dhashay Dagaalkan ayaa waxaa lagu sheegay in laba Askari dagaalkan looga dilay Ciidamada Dowladda Federaalka, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in uu jiro khasaare kale oo soo gaaray dad rayid ah.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in xoogaga Shabaab ay la wareegeen gacan ku heynta degaanka, inkastoo Ciidamo gurmad ah oo wata Gaadiidka dagaalka, kana baxay magaalada Jowhar ay gaareen degaanka Qalimow, waxayna saraakiisha sheegeen in Shabaab laga saaray degaanka.
Shabaab oo dagaalkan uga hadlay baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay sheegeen in dagaal ay kula wareegeen degaanka, Saraakiishoodana ay shacabka kula hadleen goob fagaare ah.
Degaanka Qalimow oo 25-KM dhanka Koonfureed ka xiga degmada Jowhar xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa caawa xaaladiisa wax ay tahay mid kacsan, iyada oo shacabka ay goor sii horeysay ku xaroodeen guryahooda.
Sidoo kale degaanka Qalimow waxaa dhexmarta wadada laamiga ah ee Xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar wuxuuna magaalada caasimadda ah u jiraa 60-KM, Shabaabka maalmahan dambe waxay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah Ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ee wadadaasi.